सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टको देखिएकै हो त प्रभाव ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर समाचार राष्ट्रिय समाचार सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टको देखिएकै हो त प्रभाव ?
२५ पुष २०७७, शनिबार ११:२९
नेकपा ओली समूहले धनगढीमा आयोजना गरेको बृहत् आमसभामा हजारौंको हजार संख्यामा जनसहभागिता जुटेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। साविक एमाले वा एकीकृत नेकपाकै कुनै कार्यक्रममा पनि यति संख्या पुग्न सकेको थिएन। पार्टी फुटेलगत्तै भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो शक्ति प्रदर्शन सम्भव तुल्याएका हुन् मन्त्री लेखराज भट्टले।